12V Car Rearview Mirror Defog Movie chaating China Manufacturer
Nkọwa:Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Agha,12v Car Defogger ekiri ihe nkiri,Egwuregwu Na-ekpo Ekpo maka Ndafe Na-atụ
Home > Ngwaahịa > Ụlọ Ụlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ > Ihe Mgbochi Na-ekpocha Ala > 12V Car Rearview Mirror Defog Movie chaating
Ndị injinia anyị ga-azụlite ụgbọ ala na-ehichapụ ihe mgbochi nke kwekọrọ na ihe ị chọrọ site na nkà na ụzụ kachasị elu. OEM oru amara. E mepụtara ngwaahịa anyị iji hụ CE, RoHS, Ul, ETL, ụkpụrụ. Ogo na-edozi n'ezie.
1. Na-eji ngwa ahụike. nyocha ọbara, infusion, ọgwụ iku ume, na ihe ndị ọzọ.
2. Na-atụgharị maka ngwá na ngwa ọrụ nke aerospace, nrụnye agha.
3. Ngwa na ọtụtụ home ngwa, mma Ụlọ Mmanya, sawụna ụlọ, kpo oku na nkà mmụta ọgwụ ọgwụ, anu ulo na-ekpo ọkụ na-elekọta, snow agbaze usoro, n'ala kpo oku usoro, electric okpomọkụ na n'èzí activites ngwaahịa.
4. Na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ, na-emepụta ihe ọkụkụ, na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ mgbe nile, na-ahụ maka batrị kpo ọkụ, na-enyo enyo.
Ike: 28W ± 10% Voltage inputs: AC 230V
Nguzogide mbụ: 1717-2099Ω, nkwụsị aka dị 1889Ω
4. Na PVC teflon abụọ isi, 2 x 0.75 mm square, ogologo n'èzí ogologo 730 mm + 10 -0
6. Ogwe ihe nkwụnye a ga -etinye na ihuenyo ihe nkiri na-ekpuchi ihu, ụdị ntụgharị ihu abụọ na-ekpuchi akwụkwọ dị mkpa ka ewepụsị ya
1, Ịkwụ Ụgwọ: TT, Western Union.
Egwuregwu Igwe Ụlọ Ọkụ na-eme Defogger na EC Kpọtụrụ ugbu a
Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Agha 12v Car Defogger ekiri ihe nkiri Egwuregwu Na-ekpo Ekpo maka Ndafe Na-atụ Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ọrụ Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Egwuregwu Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Agha PET Egwuregwu Ngwá Ngwá Ngwá Agha Dochie Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Nri